ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး ညီလာခံက ထိုင်ဝမ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အဆိုတင်သွင်းမှုကို ထပ်မံပယ်ချ - Xinhua News Agency
ဂျီနီဗာ၊ မေ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ၏ အမြင့်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံ WHAနှင့် WHA အထွေထွေကော်မတီ က နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးများတွင် ထိုင်ဝမ်မှ လေ့လာသူအဖြစ်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရေး အဆိုတင်သွင်းမှုကို ပယ်ချကြောင်း မေလ ၂၃ ရက်တွင် အသီးသီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၇၅ ကြိမ်မြောက် WHA ညီလာခံတွင်ချမှတ်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒသည် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက တပြေးညီလက်ခံလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းမှာ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ရပ်တန့်၍မရနိုင်ကြောင်း ထင်ဟပ်သည့်သဘောဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ DPP မှ အာဏာပိုင်များ၏ ကပ်ရောဂါ ဗန်းပြပြီး နိုင်ငံရေးခြယ်လှယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ထောက်ခံမည့်သူမရှိဘဲ အရှက်ရစေခဲ့ကာ ကျရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနှစ်ဘက်စလုံး မှ မြဲမြံစွာလက်ခံကျင့်သုံးရန် အခြေခံကာ တရုတ်ဗဟိုအစိုးရသည် ထိုင်ဝမ်ဒေသကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ အထိ ၈ နှစ်ဆက်တိုက် WHA တွင်လေ့လာသည့်နိုင်ငံအဖြစ်ခွင့်ပြုရန်သဘောတူညီထားခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ DPP အာဏာရပြီးချိန်တွင်၎င်းတို့သည် ထိုင်ဝမ်၏ လွတ်လပ်ရေးဟုအမည်တပ်သည့်ခွဲထွက်ရေးမူဝါဒကိုဆွဲကိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ ကို ဖော်ညွှန်းသည့် ၁၉၉၂ သဘောတူညီချက်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ရလဒ်အဖြစ် WHA နှင့်ချိတ်ဆက်ပါဝင်နိုင်မည့် ထိုင်ဝမ်ဒေသ ၏ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် မှာ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံ ဗဟိုအစိုးရသည် WHA ၌ ထိုင်ဝမ်ဒေသ ပါဝင်ရန် အထူးအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ WHA ဘက်မှလည်း ထိုင်ဝမ်ဒေသနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုတင်သွင်းချက်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပယ်ချခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် COVID-19 ဆက်လက်ပြန့်ပွားလျက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် WHA အား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကို စည်းလုံးစွာလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် DPP အာဏာပိုင်များသည် သမိုင်းကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ကာ ထိုင်ဝမ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုလွှာများကို ဖန်တီးပြီး “ထိုင်ဝမ်ဒေသ၏ လွတ်လပ်ရေး” အမည်ဖြင့်ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်မည့် နိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖြင့် WHA တွင် ပါဝင်နိုင်ရေးကို အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
များပြားလှစွာသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံအမြောက်အမြားကလည်း WHA တွင် ထိုင်ဝမ် နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အရေးကိစ္စများတွင် မျှတသည့်သဘောထားရပ်တည်ချက်ကိုသာကိုင်စွဲထားကြသည်။ WHA အစည်းအဝေးမစတင်မီ နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ နီးပါးက တရုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒအပေါ် လက်ခံကြပြီး ထိုင်ဝမ်၏WHO မှတစ်ဆင့် WHA သို့ဝင်ရောက်ရန်ပေးပို့သည့်စာများနှင့်အခြားလုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျီနီဗာရှိ ကုလသမဂ္ဂ၏ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Chen Xu က ထိုင်ဝမ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက်မှာ ဥပဒေ အခြေခံမရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၇၅၈ နှင့် WHA ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၅.၁ တွင် WHO က တရုတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် အခြေခံ ဥပဒေ ကို ထည့်သွင်းထားပါကြောင်း ကြေညာချက်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။
WHA တွင် ထိုင်ဝမ်ဒေသ ပါဝင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒနှင့် ကျွန်းဆွယ်တစ်ဝန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး DPP အာဏာပိုင်များသည် ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ပြတ်သားစွာလုပ်ဆောင်ကတည်းက WHA နှင့်ချိတ်ဆက်ပါဝင်မည့် ထိုင်ဝမ်ဒေသ ၏ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် မှာ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက်မှာ အစစ်အမှန်အခြေခံမရှိကြောင်း Chen က ဆိုသည်။ ဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်ဒေသမှ ကျွမ်းကျင်သူများကိုဝူဟန့်သို့လာရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရုံသာမက ဗိုင်းရပ်စ်၏ မျိုးစိတ် ဆက်စပ်မှု ကိုပါ ရယူနိုင်မည့်နည်းလမ်းကိုလည်း အထူးအသိပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်း က အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီ လကတည်းက ထိုင်ဝမ်ဒေသမှ ကျွမ်းကျင်သူ ၄၇ ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ကို WHO ဦးဆောင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှု စုစုပေါင်း ၄၄ ကြိမ်၌ ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း Chen က ပြောကြားခဲ့ပြီး “နိုင်ငံတကာ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး တွင် အကြားအလပ်”မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုသည်။
တရုတ်သံတမန်က ထိုင်ဝမ်အရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့်အဆိုပြုချက်ကို နိုင်ငံတကာက သဘောတူညီမှုလုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်းအလေးအနက်ထားပြောကြားခဲ့သည်။ WHA ဘက်မှ ထိုင်ဝမ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စများအတွက် အဖြေရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိုင်ဝမ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အဆိုပြုချက်များကိုဆွေးနွေးရန် ပယ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
DPP အာဏာပိုင်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်သည် COVID-19 အပေါ် ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ရန် “ကပ်ရောဂါကိုသုံးပြီးလွတ်လပ်ရေးကိုရှာဖွေရန်” ပင်ဖြစ်ကြောင်း Chen က ဆိုပြီး ထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်များကို ထောက်ပံ့ပေးနေသည့်အချို့နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်မှာ “ထိုင်ဝမ်ကိုသုံးကာတရုတ်နိုင်ငံအားထိန်းချုပ်ရန်”ကြံစည်မှုသာဖြစ်သောကြောင့် ယင်းမှာ ပျက်စီးရုံသာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#WorldHealthAssembly #rejects #Taiwan_relatedproposal#WorldHealthOrganization #GeneralCommittee #oneChinaprinciple #Taiwan’sDemocraticProgressiveParty #China #xinhua #xinhuamyanmar #ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံ #ထိုင်ဝမ် #အဆိုတင်သွင်းချက် #ထပ်မံပယ်ချ #ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း #တရုတ် #ဆင်ဟွာ #ဆင်ဟွာမြန်မာ
GLOBALink | World Health Assembly rejects again Taiwan-related proposal
GENEVA, May 24 (Xinhua) — The World Health Assembly (WHA), the highest decision-making body of the World Health Organization (WHO), and the General Committee of the WHA on Monday separately decided not to include in its agendaaproposal on Taiwan’s participation in the annual assembly as an observer.
The decision at the 75th WHA fully demonstrates that the one-China principle has become the consensus of the international community and represents the aspiration of the people and the trend of the times, which cannot be stopped. The political manipulation of Taiwan’s Democratic Progressive Party (DPP) authorities through the pandemic wins no support, brings disgrace to themselves and is doomed to fail.
Since the DPP came into power, it has stubbornly adhered to the separatist position of “Taiwan independence” and refused to recognize the 1992 Consensus that embodies the one-China principle. Asaresult, the political foundation for the Taiwan region to join the WHA has ceased to exist.
As COVID-19 continues to spread across the world, the international community has expected this year’s WHA to strengthen cooperation and solidarity in fighting the epidemic. However, the DPP authorities have gone against the trend of history and insisted on making Taiwan-related proposals, which fully exposed its political plot to engage in “Taiwan independence” separatist activities by hyping up its participation in the WHA.
The vast majority of the world’s countries upholdajust position on Taiwan-related issues at the WHA. Prior to the opening of the WHA, nearly 90 countries expressed their adherence to the one-China principle and opposition to Taiwan’s participation in the WHA through sending letters to the WHO and other ways.
Chen Xu, China’s Permanent Representative to the United Nations Office at Geneva, said inastatement at the meeting that the Taiwan-related proposal has no legal basis, stressing the United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 2758 and WHA Resolution 25.1 provide the legal basis for the WHO to abide by the one-China principle.
The Taiwan region’s participation in the WHA must be handled in accordance with the one-China principle and through cross-strait consultations, he noted, adding since the DPP authorities obstinately adhere to the “Taiwan independence” stance, the political foundation for Taiwan to join the WHA has ceased to exist.
Since April 2021, as many as 47 experts from Taiwan were approved to participate in the WHO-organized technical activities 44 times in total, Chen said, noting there isn’t any so-called “international epidemic prevention gap.”
The real purpose of the DPP authorities’ attempt to exploit COVID-19 for political manipulation is to “use the pandemic to seek independence,” Chen said, adding that the endorsement of certain countries for the Taiwan authorities isapolitical trick of “using Taiwan to contain China,” which is bound to fail.